MOFON’AINA TALATA 23 NOVAMBRA 2021 – Athis Fanantenana
MOFON’AINA TALATA 23 NOVAMBRA 2021
23 novambra 2021
20 Ary raha mahita an’i Jerosalema voahodidin’ny miaramila ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky ny fandravana azy. 21 Ary izay any Jodia amin’izany andro izany aoka handositra ho any an-tendrombohitra; ary izay ao Jerosalema aoka handositra ho any ivelany; ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony. 22 Fa ireo dia andro famaliana mba hahatanteraka izay rehetra voasoratra. 23 Fa lozan’ny bevohoka sy ny mitaiza kely amin’izany andro izany! satria hisy fahoriana lehibe eo amin’ny tany ary fahatezerana amin’ity firenena ity. 24 Dia ho ringana amin’ny lelan-tsabatra izy ka ho entina ho babon’ny firenena rehetra, ary Jerosalema hohitsahin’ny jentilisa mandra-pahatanteraky ny andron’ny jentilisa. 25 Ary hisy famantarana eo amin’ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary etỳ ambonin’ny tany dia hisy fahorian’ny firenena amin’ny fahaverezan-kevitra noho ny firohondrohon’ny ranomasina sy ny fanonjany, 26 ka ho reraka ny fon’ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin’ny tany; fa ny herin’ny lanitra dia hohozongozonina. 27 Ary amin’izany andro izany dia hahita ny Zanak’olona avy eo amin’ny rahona amin-kery sy voninahitra lehibe izy. 28 Ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandrà, ka asandrato ny lohanareo; fa manakaiky ny fanavotana anareo.
LIOKA 21 : 20 – 28
1.Satria eo am-pelatanan’ny Tompontsika izay zava-mitranga rehetra (and 24)
Na dia mahatsiaro mijaly aza isika satria anjakazakan’ny olona tsy matahotra an’Andriamanitra dia aza manary toky, fa mbola ho faranan’Andriamantra io satria manana fahefana hanao izany Izy. Mety mbola alina fotsiny ny andro fa mbola ho avy ny maraina . Hoy ny Ohabolana 13 : 18 hoe : « Raha mbola hisy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao »